Manamafy ny onitra amin’ireo fantsom-pahitalavitra noho ny votoaty “ara-politika” ny Vaomieran’ny Serasera Zeorziana · Global Voices teny Malagasy
Manao fihetsiketsehana ivelan'ny lapan'ny GNCC ireo mpikatroka
Voadika ny 17 Desambra 2021 17:32 GMT
Pikantsary avy amin'ny tatitra an-dahatsarin'i Mtavari Arkhi.
Navoaka voalohany tao amin'ny OC Media ity lahatsoratra nosoratan'i Tata Shoshiashvili. Naverina navoaka eto ny dika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fiaraha-miasa ara-botoaty.
Namoaka fanambarana ny vaomiera Nasionaly Zeorziana misahana ny serasera (GNCC-ang) tamin'ny 25 Novambra fa mandoa onitra ireo fantsom-pahitalavitra maromaro tahaka ny Mtavari, Imedi, Studio Maestro sy Kartuli Arkhi.
Nampandoa onitra an'ny Mtavari Arkhi TV, fantsom-panoherana lehibe indrindra any Georgia tamin'ny vola mitentina Gel 112,000 ( 35.000 dolara Amerikana), izany hoe 1 isanjaton'ny vola miditra isan-taona ny GNCC, noho ny fandefasana “dokambarotra ara-politika” telo. Samy voasazy handoa onitra 2 500 (800 dolara Amerikana) ny Imedi, izay miankina amin'ny mpomba ny governemanta, sy ny Studio Maestro raha nahazo fampitandremana kosa ny Kartuli Arkhiwas.
#Georgia: the gov.ment critical @MtavariChannel fined $36,000 for airing clips supportive of @SaakashviliM deemed ‘political propaganda outside of the allocated period’. @RSF_inter denounces a tool for censorship and a crippling sum & calls the regulator to revise its decision. pic.twitter.com/6xDJcynYTO
— RSF (@RSF_inter) November 26, 2021
#Georgia: Voasazy handoa onitra 36.000 dolara Amerikana ny @MtavariChannel mpitsikera ny governemanta noho ny fandefasana horonantsary manohana ny @SaakashviliM ary heverina ho fampielezan-kevitra ara-politika ivelan'ny vanim-potoana natokana ho amin'izany’. Manameloka izany ho fitaovana ho an'ny sivana sy onitra tafahoatra ny @RSF_inter ary miantso ny mpandrindra mba handinikany fanapahan-keviny.
Nanameloka ilay onitra i Nika Gvaramia, lehiben'ny Mtavari, mamaritra izany ho “sivana” ary nilaza fa tsy mikasa handoa ny onitra ny fantsona ka hampakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana.
Araka ny filazan'ny GNCC, voasazy handoa onitra ny Mtavari noho ny fandefasana horonantsary telo teo anelanelan'ny 17 sy 18 novambra. Nanasongadina ny sarin'ireo manampahefana ambony ao amin'ny Sampan'ny Fonja Zeorziana sy ny fitsarana izay tafiditra tamin'ny fisamborana ny filohan'i Gergia teo aloha, Mikheil Saakashvili, ny iray tamin'ireo horonantsary. Nahitana ny soratra #FreedomforMisha ny sasany tamin'ireo sary. Araka ny filazan'ny Civil.ge, nilaza ny fitarantaran'ny feo tamin'ny horonantsary hoe: ​​ity olona ity dia “namono an'i [Saakashvili],” taorian'ny sary tsirairay. Nifarana tamin'ny fitakian'ny mpitantara ny “famotsorana an'i Mikheil Saakashvili” ilay horonantsary.
Ahitana sombiny avy amin'ireo fanambarana nataon'ny filoham-pirenena Zeorziana Salome Zurabishvili, ireo mpitarika ny Antoko Georgian Dream, ary ireo depioten'ny antoko momba ny fisamborana an'i Saakashvili sy ny fitokonana tsy hihinan-kanina ny lahatsary faharoa. Narahana fitantarana mitovy amin'ny feo tamin'ny horonantsary voalohany ny fanambarana tsirairay.
Nampiseho ny sarin'ireo mpitarika ny Georgian Dream sy ny mariky ny antoko miova ho tarehin'ny filoha Rosiana Vladimir Potinina ny horonantsary fahatelo, izay noforonin'ny Shame Movement, vondrona mpanohitra mpikatroka liberaly.
Ireo mpikatroka miaraka amin'ny Shame Movement nanao fihetsiketsehana teo ivelan'ny GNCC taorian'ny fanambarana ny fanapahan-kevitra:
Araka ny fanitsiana ny taona 2012 tamin'ny fitsipiky ny GNNC, “tsy azon'ny haino vaky jery atao ny mandefa dokambarotra fifidianana mialoha [ara-politika] sy hetsi-pifidianana mialoha ny fotoana rehetra ankoatra ny fotoana natokana ho an'ity tanjona ity.
Voasazy handoa onitra GEL 58000 (18 000 dolara Amerikana) ihany koa ny Mtavari noho ny fanitsakitsahana voalaza fa mitovy amin'izany.
Voasazy handoa onitra ny Studio Maestro, Kartuli Arkhi, sy Imedi noho ny tsy fandefasana ny adihevitra ara-politika nandritra ny fampielezan-kevi-pifidianana mialoha ho an'ny fifidianana monisipaly 2021.
Niresaka tamin'ny OC Media, nilaza i Natia Kapanadze, mpandrindra ao amin'ny Coalition for Media Advocacy (Firaisambe ho an'ny Fiarovana ny Media), Mpanaramaso media ao an-toerana fa nahitana fironana hanome onitra ambony bebe kokoa amin'ny media mpanohitra ny GNCC
Mampiharihary izany ny fanapahan-kevitra [ny alakamisy] fa mandrahona ireo haino vaky jery amin'ny fomba samihafa ny vaomiera ary indrisy, fa noho ny politikam-panoratana samy manana ny azy no anton'izany fikarakarana samihafa izany “hoy izy.
Nanampy koa izy fa tamin'ny fandikana ny horonantsary navoakan'ny Mtavari ho ampahany amin'ny fampielezan-kevi-pifidianana, mety hampidi-doza ny “fahafahan'ny fikatrohana sivily” ny vaomieran'ny serasera ary mety hampiditra ny “famerana ny fahaleovantenan'ny tonian-dahatsoratra.”